Allaahu akbar: Dagaalkii Maraykanku ku qaaday Muslimiinta oo sababay dhaqaalihii Maraykanka oo dhulka galay. | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Allaahu akbar: Dagaalkii Maraykanku ku qaaday Muslimiinta oo sababay dhaqaalihii Maraykanka oo dhulka galay.	Seteembar 27, 2008
Posted by spiritualphilantropy in Maqaalada iyo Muuqaalka, Wararkii u dambeeyay.
Sabti 27 Ramadaan 1429 (27/09/2008)
Maraykanka oo 7 sano ka hor ku dhawaaqay dagaal uu ugu magac daray dagaalii Saliibka ayaa hadda maraya xaaladdii ugu xumayd ee dhaqaale, waxana mar kaliya khadka ka baxay Bangiyadii ugu waawaynaa Maraykanka iyo shirkado badan oo dadka lacago amaahin jiray, waxa dhulka galay qiimihii dolarku ku lahaa aduunka waxana khalkhalay dhammaan dhaqaalihii Maraykanka.
Sidoo kale waxa qaylo kasoo yeertay shacabkii Maraykanka oo waayay lacagihii ribada ahaa ee ay bangiyada ka qaadan jireen iyagoo ku dhawaaqaya in uu Buush khayaameeyay oo uu meel cidlo ah dhigay, waxana dadkaa ka mid ah Ina Ismaaciil Samatar oo shalay bbc-da ka hadlay oo isku haysta nin Maraykan ah oo u ooyaya jabka Maraykanka.
Hadda waxaa khalkhalsan dhammaan haykalkii iyo jiritaankii Maraykanka waxana dadka wax falanqeeyaa ay sheegayaan in arintani ay tahay middii Maraykanku ku jibi lahaa.
Inakasta oo maamulka Bush uu rabo in fashalka dhaqaale uu dhinac kale u leexiyo hadana waxaa iska cad sababta Jabkan dhaqaale ee Maraykanka oo ah dagaalka balaaran ee uu kula jiro Muslimiinta isagoo ugu gabanaya magaca argagixiso.
Maraykanka ayaa 11 september kadib waxa uu galay dagaal caalami ah oo uu ku bixinayay dhaqaale aad u xoogbadan, waxana bilowday Mashaariic dowladuhu ay ku qaraabtaan oo Maraykanka lacag adag kaga qaataan oo ay ugu magac dareen la dagaalanka argagixisada, waxana aad u yar dowlad aan qaadan mashruucaas oo aan dhaqaale Maraykanka kaga qaadan.
Dhinaca Soomaalida Mashruucan Maraykanku bixiyo ee la dagaalanka argagixisada waxa soo qaatay dad badan oo ay ka mid ahaayeen hogaamiye kooxeeydyadii kadibna marii ay ku khasaareen waxa mar labaad soo qaatay dowladda ridada oo kharashbadan lasoo siiyay, iyadana markii lagu khasaaray waxa Mashruucii lagu wareejiyay Itoobiya oo kharash xad dhaaf ah ka qaadatay Maraykanka, hadana waxa muuqatay in Itoobiya guul ka keeni wayday Mashruucii la dagaalanka argagixisada, haatana waxa soo muuqday in qolo cusub lagu wareejinayo Mashruucii la dagaalanka argagixisada, qolodaas oo ah garabyada lagu heshiisiiyay Jabuuti, waxana hadda la soo siiyay labada garaba miisaaniyadii u horeesay oo ka koobnayd 50 milyan oo dolar, oo garab kasta la siiyay 25 milyan, waxana hadda lacagtaasi badankeedu soo gashay gudaha Soomaaliya iyadoo loo isticmaalayo kala furfuridda Mujaahidiinta iyo iska horkeenkooda, waxana si fiican u fashiliyay barnaamijkan Sheekh Xasan Turki oo sheegay in shandado lacago doolar ah loo keenay oo uu iska diiday.
Si kastaba ha ahaatee mar haddii dowladii Maraykanka ee bixinaysay Mashruucan ay haatan qaylo dhaan kasoo yeertay oo bangiyadii ay faaruqeen waxaa hubaal ah in Mashruucii la dagaalanka argigixisaduna uu halkaa ku fashilmay oo maanta laga bilaabo aanay jiri doonin nin Mashruuc kusoo qaata la dagaalanka Islaamka.
Arintan ayaa guul wayn u ah dhammaan Mujaahidiintii ku samirtay dagaalkii ay Saliibiyiintu kusoo qaadeen, maanta wixii ka dambeeyana guusha iyagaa iska leh isha’allaah.
Faahfahin ku saabsan qoys Soomaaliyeed oo dhamaantood la wada gowracay K/ Afrika.